တရုတ် Isopropylated Triphenyl ဖော့စဖိတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ကံဇာတာ
Isopropylated Triphenyl Phosphate သည် C27H33O4P ၏မော်လီကျူးဖော်မြူလာနှင့်အတူဓာတုပစ္စည်းဖြစ်သည်။
IPPP35 သည် halogen-free phosphate flard retardant plasticizer ဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှစ်ကြိမ်မညစ်ညူးစေပါ။ ဤဖော့စဖိတ်မျိုးကွဲများတွင် IPPP35 သည်အသင့်အတင့် viscosity နှင့် phosphorus ပါဝင်သောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ TheIsopropylated Triphenyl ဖော့စဖိတ်သည်အရောင်မဲ့။ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး၎င်းသည် miscibility ကောင်းမွန်သောကြောင့်မီးလျှံနှံ့။ ပလတ်စတစ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Isopropylated Triphenyl ဖော့စဖိတ်သည်မီးလျှံနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ်အကြားမျှတသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ပြုပြင်ထားသောပစ္စည်းများအားအရောင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအားမပြောင်းလဲစေနိုင်သကဲ့သို့ PVC၊ ဖိုင်ဘာအစေး၊ ဒြပ်ရော်ဘာ၊
Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန် isopropylated triphenyl ဖော့စဖိတ်ထုတ်လုပ်သူများထဲတွင်စျေးကြီးစွာဖြင့် Ipp 35၊ kronitex 100, triaryl phosphates, reofos 35 တို့ကို၎င်း၏စက်ရုံမှဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
1.Synonyms: IPPP, Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated, Kronitex 100, Reofos 35, Triaryl ဖော့စ ဖိတ်2. မော်လီကျူးအလေးချိန်: 3903.CAS NO .: 68937-41-74. ဖော်မြူလာ: C18H15 R3O4P5.Specifications: ပုံပန်းသဏ္ဌာန်: အရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်အလင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှု။ (25/25 ℃): 1.183Acid Value (mgKOH / g): 0.2 maxColor အညွှန်းကိန်း (APHA Pt-Co): 80 maxViscosity @ 25 ℃, cps: 35-50Posporus အကြောင်းအရာ: 8.6% 6.Applications: တစ်အဖြစ်အကြံပြုသည် PVC၊ polyethylene၊ leatheroid၊ film၊ cable၊ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် polyurethanes၊ ၎င်းသည်အင်ဂျင်နီယာစုပ်ယူမှုများအတွက်မီးလျှံတားဆီးသည့်လုပ်ဆောင်မှုအထောက်အကူအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည့် mofified PPO, polycarbonate နှင့် polycarbonate ရောစပ်ခြင်း။ ၎င်းသည်ဆီခုခံမှု၊ လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုနှင့်မှိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအပေါ်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ၇. အထုပ် - 200kg / iron drum net (16MTS / FCL)， 1000KG / IB CONTAINER, 20-23MTS / ISOTANK ။ ဤပစ္စည်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ UN3082, CLASS 9
Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန် isopropylated triphenyl phosphate ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအနေဖြင့်၎င်း၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော isopropylated triphenyl phosphate ကိုသင်ဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။